Octoparse: Qalabka Extracting Effective Web - Isticmaalka Khafiifka ah
Webka xoqitaanku waa qalab wax ku ool ah ee labada raadiye-yaasha iyo shirkadaha isku daya inay raadiyaan macluumaad badan oo laga helo bog internet oo kala duwan, sida Facebook, Amazon, eBay si toos ah. Octoparse waa barnaamij software oo weyn oo soo kabanaya oo bixiya adeegsigeeda qaar ka mid ah baakadaha waaweyn si loo ururiyo xogta oo u rogo faylasha muuqaalka sida HTML, Excel, iyo TXT. Kuwa soo socda ayaa ah doorashooyin waaweyn oo ay bixiso Octoparse:
Isku darka Macluumaadka laga helo Websaytka Dynamic Web Pages
Octoparse waa qalab si sahlan loo isticmaalo oo ka caawiya dadka isticmaala waxyaabaha ka soo baxa bogga. Wuxuu ka shaqeeyaa bogagga internetka ee firfircoon, oo ay ka mid yihiin xogta xoqista oo la xidhiidha sharraxaadda. Intaa waxaa dheer, adeegga daruuriga ah wuxuu heli karaa oo ku keydin karaa qaddar badan oo xog ah.
Macluumaadka qarsoon ee laga soo qaato Websiteka
Xaalado badan oo raadiyeyaasha webka waxay raadinayaan inay helaan macluumaad gaar ah bogagga shabakadda, laakiin ma heli karaan faahfaahinta loo baahan yahay, sababtoo ah ee kakanaanta bogga ama sabab kasta oo kale. Octoparse waxay heli kartaa oo soo saari kartaa dhammaan waxyaalihii qarsoonaa.
La soco Contents with Scrinite Scrolling
Xogta soo jiidashada leh wareegga aan tooska ahayn waxay noqon kartaa hawl culus. Baadhayaasha Webka waxay u baahan yihiin inay hoos udhigaan hoose ee bog kasta oo ka mid ah bogagga ay booqdaan si ay uqoraan qoraal ama sawirro dheeraad ah. Mawduucyada si joogto ah ayaa loo siiyaa marka ay hoos ugu sii socdaan hoosta bogga.
Octoparse waxay ka caawin kartaa dadka isticmaala in ay soo saaraan dhammaan hyperlinks posted on website qaar ka mid ah. Dhab ahaantii, waxay siisaa dadka isticmaala hab fudud si ay u baabi'iyaan boqolaal IP-yada, isla mar ahaantaana, waxay bixisaa dhowr fursadood oo kala duwan, sida Ajax Timeout, oo lagu dhisay qalab XPath, iwm.Sidoo kale, Octoparse waxay ku uruurin kartaa xogta raadiyaha internetka leh codsiyo gaar ah oo si guul leh u gudbiya xogta habaysan.
Shaqooyinka kala qaybinta
Isticmaalayaasha, waxaa wanaagsan inay kala qaybiyaan shaqadooda, haddii ay internetka ka baxdo. Halkii ay ka heli lahaayeen xogtooda bilowga hore, waxay kala saari karaan hawl gaar ah laba mashruuc.
Dhexdhexaad, macaamiishu waxay samayn karaan waxyaabo badan, sida furitaanka bogga internetka qaarkood, geli koonto, sawirro gaaban, galaya qoraalo iyo kuwo kale. Octoparse sidoo kale waxay siisaa dadka isticmaala habka casriga ah si ay uga caawiso inay wax ka qabtaan xogta adag. Tusaale ahaan, si aad u isticmaasho qaabkan, dadka isticmaala waxay u baahan yihiin in ay jiidaan oo dhiciyaan dhagaxyada gudaha nidaamka habka socodsiinta si ay u habeeyaan hawlaha kala duwan. Habka caqli-gal ah wuxuu dadka u siinayaa ikhtiyaarka si ay u rogaan bog kasta oo shabakad ah oo si toos ah u galaan Excel iyadoo la riixaayo badhanka hal. Dhab ahaan, habkani wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa jadwalka bogagga liiska, sida natiijooyinka raadinta ama bogagga qaybta Source .